Global Voices teny Malagasy » ‘Fiarovana fa tsy ny zo iombonana ve’ ? Voaràra ny jono ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jona 2019 16:22 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika (fr) i Suzanne Lehn, miora
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana
Vao avy napetraky ny  governemanta ao Bangladesh ny fandraràna izay rehetra mety ho endrika fanjonoana an-dranomasina, manomboka ny 30 May hatramin'ny 23 Jolay 2019 mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fihavaozana maharitra amin'ny tahirin-trondro. Ny mpiandry sisintany sy ny tafika an-dranomasina no hisafo ny hoalan'i Bengale mba ho fampiharana ilay fandraràna. Saingy tena kapoka mafy ity fanapahankevitra ity ho an'ireo vohitra fonenan'ny mpanjono, izay ny ankamaroany dia miankina amin'io asa io ny fivelomany. Na nampanantena  aza ny fanjakana fa hanome solontsakafo isambolana ho an'ireo mpanjono voadona amin'izany, nataon'izy ireo  izay handrenesana ny tsy hafaliana sy ireo fahasahiranana miandry azy ireo ato anatin'ireo volana roa ho avy.
Ara-pomban-drazana, miantehitra amin'ny jono i Bangladesh mba hamelomana ireo vahoaka ao aminy izay vinavinaina ho 163 tapitrisa eo ho eo. Mihoatra ny 60 % amin'ny proteina azo  avy amin'ny biby ao anatin'ny sakafo ao Bangladesh no avy amin'ny trondro. Manana fari-pihariana ara-toekarena voatokana io firenena io, mirefy 106.000 km2, ao amin'ny hoalan'i Bengale, izay manome ny 73 % amin'ny velarantany an-tanety sy an-dranomasina ao amin'ny firenena. Misy karazana trondro eo amin'ny 475 eo, makamba 36, foza 15 ary 301 ireo karazana akorandriaka sy tekateka ao amin'ny hoalan'i Bengale ; an-jatony ireo karazana trondro jonoina ho an'ny tsenam-barotra. Vinavinaina ho roa tapitrisa eo no isan'ireo mpanjono miasa  ao anatin'ny sehatry ny jono sy ny fiompiana trondro. Antsasaky ny iray tapitrisa no miasa amin'ny jono mahazo tombontsoa sy mivelona amin'ny faritry ny morontsiraka.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nanomboka nitontongana  ny tahirina trondro erantany noho ny fanjonoana tafahoatra sy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Tsy afa-miala amin'izany i Bangladesh. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, napetraka any aminà faritra voafetra ny fandraràna mandritra ny fotoana fohy ny fanaovana jono mitodika ho amin'ny tsenam-barotra, saingy izao no voalohany andraràna ireo sambo mpanjono rehetra tsy hivoaka ny seranana mandritra ny fotoana lavalava. Voakasika amin'izany ihany koa ireo mpanjono ao an-toerana izay miasa eny amin'ny renirano sy ny ranomasina. Nambaran'ireo manampahefana fa apetraka sy ho ampiharina maharitra mandritra ireo taona maro ho avy ity fandraràna ity, fotoana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fotoana fanatodiazana na fiterahan'ny trondro, mba hanabontsinana indray ny tahirin-trondro.
Nilaza  tamin'ny mpanao gazety ny minisi-panjakàna misahana ny jono sy ny fiompiana, Ashraf Ali Khan Khasru fa:
Tamin'ny Oktobra 2018, noraràn'ny  governemanta ny fanjonoana nanerana ny firenena ny alose hilsa , nandritra ny 22 andro, mba hahafahan'ny trondro manatody sy mifindra toerana ao amin'ny hoalan'i Bengale mankany amin'ireo dobo sy renirano ao Meghna ary ireo renirano hafa. Ny angondrakitry ny WorldFish  tany amin'ireo toerana masina ho an'ny alose hilsa dia nampiseho fa ny fitambaramben'ireo trondro azo tamin'io karazany io dia nitombo 28 %, avy any amin'ny 387.211 ho 496.417 taonina nandritra ny fotoam-panjonoana 2015 sy 2016 noho ny fisian'ny fandraràna nitovy tamin'io.
Tamin'ny Martsa 2019, nametraka  fandraràna jono mandritra ny 60 andro ny governemanta, ho an'ny karazany rehetra ao Padma, Meghna sy ireo sakelika mifampiankina amin'izy ireo any amin'ireo faritra samihafa ao Chandpur, Bhola ary Lakshmipur. Fandraràna  iray mitatra ho telo volana ao amin'ny farihy Kaptai , ilay farihy voatrolombelona lehibe indrindra ao Bangladesh.
Hatry ny ela ireo fikambanan'ny mpanjono ao an-toerana no efa nanohitra ireny fandraràna ireny. Ataon-dry zareo koa izany ankehitriny amin'ilay fandraràna misy amin'izao fotoana izao, amin'ny fanehoana  ny hatezeran-dry zareo amin'ny alàlan'ny filaharana sy fifamoriana eny an-dalambe any amin'ireo faritra amorontsiraka. Araka ny lazain'ny  fikambanan'ireo tompona sambo fanjonoana ao Bangladesh (teny anglisy nafohezina hoe BFBOA), marobe ireo mpanjono madinika miasa isanandro no voatery mitrosa, raha tsy izany tsy mihinana ny ankohonany raha tsy misy fanonerana ataon'ny mpitantana.
Nanokana  vary 36.000 taonina ny fanjakana mba hozaraina any amin'ireo vohitra voakasika amin'izany, ary miomana ny hanolotra fatram-bary 40 kg isambolana ho anà mpanjono miisa 414.784 sy ny ankohoanìizy ireo any aminà distrika 12, Ireo mpanjono kosa etsy ankilany dia nampahatsiahy an'ireo tomponandraikitra fa tsy ampy hamelomana araka ny tokony ho izy ny fianakavian-dry zareo raha izay fanomezana karazan-tsakafo tokana monja.
Anwar Hossain Sikder, mpikambana no sady mpitantsoratry ny BFBOA, manampy  fa homen'ilay fandraràna tombon-dahiny tsy araka ny tokony ho izy ireo orinasa misahana fanjonoana avy amin'ireo firenena mpiray vodirindrina :
Any anaty media sosialy, omen'ireo mpisera laharam-pahamehana ny fiarovana, raha ny hafa indray kosa manipika ny ilàna ny fitsinjovana ny velontena isanandron'ireo mpanjono tra-pahasahirànana. Ilay matihanina amin'ny resaka teknolojiam-pifandraisana sy fampitambaovao, Asif Saif Uddin, niantso  ho amin'ny famoronana asa fanolo ho an'ireo mpanjono nafindra toerana :
Ilay Bangla mpila ravinahitra Md Osman Ghani manoratra  ao amin'ny Facebook mikasika ny fanonerana ireo mpanjono :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/01/139437/
 napetraky ny: https://en.prothomalo.com/bangladesh/news/195913/65-day-ban-on-fishing-in-Bay-of-Bengal
 nataon'izy ireo: https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/bangladesh-fishing-ban.html
 proteina azo: https://www.worldfishcenter.org/country-pages/bangladesh
 nanomboka nitontongana: https://www.nytimes.com/2019/02/28/climate/fish-climate-change.html?module=inline
 ny alose hilsa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alose_hilsa
 farihy Kaptai: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaptai_Lake
 nanohitra : http://www.newsgarden24.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A7%AC%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%A7/